Ahofa « maimam-poana » amin’ireo koreana tatsimo i Madagasikara – Malag@sy Miray
Ahofa « maimam-poana » amin’ireo koreana tatsimo i Madagasikara
Somary gaga ihany ny tena raha nahita io vaovao mahazendana sy mahagaga ary mety hanafin-tohina mihitsy aza raha tsy voahevitra firy ny momba azy. Raha tsorina amin’ny fiteny fohy sy mazava dia ahofa mandritry ny 99 taona amin’ireo koreana tatsimo maimam-poana ny 1,3tapitrisa hektara amin’ny firenana malagasy.
Izany hoe 1/5 ny tany azo volena ary 1/2 ny velaran’ny firenena belza izany raha ny fandalinana nataon’ireo mpanara-baovao sy mpanao gazety avy any ivelany toa ny « Courrier international » na « BBC news » na « RTBF« . Ny antony dia fanajarina ny tany mba ahafana mamboly katsaka sy mamokatra menaka no anton’izany ary avy eo dia alefa « maimaim-poana » any Korea izany rehefa vokatra. Mikasa ny hanenjika 5tapitrisa taonina isan-taona izy ireo alohan’ny 2023.
Tsy fitsikerana be fahatany no ezahina entina eto fa famakafakana fohy ahafahantsika milaza raha tsara ho an’ny malagasy na fanambakana io fifanarahana izay navoakan’ny gazety anglisy « Financial Times » io.
Ny tombon-tsoa sy ny fatiantoka ho an’ny malagasy no ndao hitondrana izany famakafakana izany.
Raha ny fatiantoka aloha no jerena mialoha dia :
– mety ho very tanindrazana sy vohidrazana ireo fianakaviana maro satria ilan’ny firenena ny tany « utilité publique » ka tsy afaka ny hanao na inona na inona ireto vahoaka madinika izay lasa ny taniny.
– mety hisy endrika fanalikana na fanadevozana amin’ny fomba vaovao ireo mpiasa malagasy raha ny lesona sy ny ohatra azo avy amin’ny lasa no jerena.
– ny malagasy tsy mbola ampy sakafo ka dia alefa maimam-poana any ivelany ve ny vokatra « REHETRA »
– misy hofan-tany na hetra (impôts fonciers, taxe communale, ristourne, …) tsy miditra amin’ny kitapom-bolan’ny firenena malagasy
– mety ho mpiasa vitsivitsy ihany no ho raisina hiasa ary tena hiasa mafy mba tsy hahabetsaka ny vola mivoaka amin’ireto mpampiasa vola (charge salariale)
– tsy misy mbola afaka manome toky fa tsy ho voakasika sy tsy ho simba ireo valan-javaboahary izay harenan’ny malagasy. Tsara mantsy raha mba eny amin’Ihorombe na any Tampoketsa aloha no omena mialoha fa tsy tonga dia ny lemaka izay efa fananan’olona amin’ny ankapobeny.
– raha misy fidiram-bola maharitra ireo tantsaha dia mety ho hita ihany koa ny fiatraikan’izany ka mahasoa ho an’ny manodidina na « effet d’entraînement ». Anisan’izany ohatra ny fitombon’ny filana sy ny fanjifana ka ahafan’ireo olona hafa mivarotra na mampiroborobo ny fitanterana na ny fifaneraserana amin’ny tanàna hafa, na ihany koa fivoaran’ny faritra voakasika amin’ny alalan’ny fihatsaran’ny fiainan’ny mponina.
– Asa na tafiditra ao anaty fifanarahana fa mety hihatsara ihany koa ireo lalana sy tambanjotra misy any amin’ireo faritra.
– raha mitombo ny fidiram-bolan’ny mponina dia mety ahafahana mampitombo ny famporisihana ireo zaza hiditra an-tsekoly mba hampitombo fahalalana azy ireo
– mahazo traikefa sy fahaiza-manao vaovao ireo tantsaha malagasy mba ahafan’ireo olona hafa izay tsy miasa mampihatra amin’ny alalan’ny fakan-tahaka izany traikefa sy fahaiza-manao vaovao izany.
Tsy ireo ihany no tombon-tsoa sy fatiantoka mety ho hita fa ireo aloha no tsaroako tampoka eto ka dia ifampizarana. Efa tonga teto Madagasikara mantsy ireo tompon’andraikitry ny orinasa DAEWOO MAdagasikara ireo tamin’ny volana jolay lasa teo fa izao navoakan’ny Financial times izao vao mivoaka ny vaovao. Raha ny fahafantarana izay loharanom-baovao izany mantsy dia tokony azo itokisana raha ny fahaizana sy ny fomba fiasa no lazaina.
Rohy hafa :
Par Aiky 3 Commentaires
31 décembre 2008 à 13:22
Mampalahelo be mihitsy ny zava mitranga eto antoerana eto, fa diso filaza ianao fa tsy tany ho hajariana akory no ho omena ny koreana tatsimo fa tany efa voajary ary tany efa nanan-tompo hatry ny ela saingy tsisy taratasy aram-panjakana manamporofo izany. Ho aiza marina no hiafaran’ity tany malalan-tsika ity raha izao fitiavantenanan’ny fitondram-panjakana izao no mitohy? hanafaratra fianakaviana koréana mihisa dimy tapitrisa (5 millions de famille) ny fanjakana hipetraka maharitra eto Madagascar ny fitondrana fa izay no takian’ny koreana vao hitohy ny asa izay lazaina fa mampandroso ny Tanindrazana, ka raha eritreretina fa miteraka efatra isan’olona ireo fianakaviana ireo dia efa hitovy amin’ny isan-tsika Malagasy ny isan’izy ireo, ka sady ho very tany izany isika no ho very firenena satria isika indray no ho vitsy anisa no sady tsy manan-bary iray venty eto amin’ny tanin-tsika. Mba alefaso lavitra ny fisainana ry Malagasy dia sokafy ny maso sao ho maty tara dokotera. Mampalahelo, indrisy mampalahelo
Loza tokoa raha mitranga izany. Naharay mailaka avy tamina collectif aho manamafy io vaovao io. Ny tena mampalahelo ahy dia ny mieritreritra ny fahasahiranan’ny olona raha mba hanao ny taratasin’ny taniny nefa izao toa natao varo-boba ho an’ny vahiny ny tany efa an’olona. Tamin’ny volana novambra 2008 teo izao de nahitana filaharana be teny amin’ny firaisana teny handoavana hetra tany. Le fanjakana efa sady omena vola indray no tsy manaja ny olona te hanara-dalàna.
patrimoinemalgache(at)yahoo.fr, io ny adiresin’ilay fikambanana mitaky ny hanafoanana io « fampandrosoana maharitra » mampihembotra io raha mila fanazavana fanampiny enao.
Bonne année de aza kivy miady amin’ny tsy rariny.
commentaire modifié pour que l’adresse email ne soit pas spammée
4 janvier 2009 à 17:26
Tena loza tokoa raha izany no mitranga an, aleo ny tany voajary mijanona ho an’ny malagasy fa izay tena mety tsy hojariana mihitsy no alefa.
Mila misokatra ihany kosa nefa aloha ramalagasy na dia izany fa saingy tsy omena fotsiny toraka izany.
Mba jereo ihany izay mahasoa ny vahoaka ry mpitondra oo!
Ny fifamelan'ny samy malagasy
Se perdre dans la modelisation/conceptualisation ou agir en toute spontaneité